လွတ်လပ်စွာဆေးဆိုင်ချည်နှောင်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်သမျှသောကြွက်သားအပန်းဖြေခြင်းနှင့် analgesics ၏အမြောက်အများ, အနိမ့်တန်းနှင့်အလယ်အလတ်နာကျင်မှုဆန့်ကျင်မှသာထိရောက်ဖြစ်ကြသည်။ ပိုပြီးပြင်းထန်ကိစ္စများတွင်သုံးအုပ်စုများသို့ခွဲခြားနိုင်ပါသည်ထားတဲ့ခိုင်မာတဲ့ကိုက်အခဲပျောက်ဆေး, require:
nonsteroidal antiinflammatory မူးယစ်ဆေးဝါးများ;
မူးယစ်ဆေးဝါး analgesics ။
Non-တီးရွိုက် Anti-inflammatory မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ကြွက်သားအပန်းဖြေ၏အုပ်စုတွင်မူးယစ်ဆေးဝါးအများဆုံးထိရောက်သောမူးယစ်ဆေးဝါးများကိုအောက်ပါအမည်များဖြစ်ကြသည်:
ငါကို ယူ. ,
Pentalgin Plus အား;
လူနာကင်ဆာပညာရပ်ဌာနများတွင်နာကျင်မှု၏ကုသမှုများအတွက်အထူး 3-hstupenchataya အစီအစဉ်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ပထမအဆင့်မှာတော့အထက်ပါစာရင်းထဲက nonsteroidal Anti-inflammatory မူးယစ်ဆေးဝါးများတာဝန်ပေးအပ်ထားပါသည်။ ဒီကုထုံးထိရောက်မှုဖြစ်ပါတယ်လျှင်, အားနည်း opioids ခန့်အပ်:
ဒါဟာစိုးမိုးရေး, acetaminophen သို့မဟုတ် Aspirin ကိုသည်အတိုင်း, ဖွဲ့စည်းမှုအားနည်းသည့်အတွက်စုစုပေါင်း medicaments နှင့်တစ်ဦးမူးယစ်ဆေးဝါး analgesic နှင့် Non-တီးရွိုက် Anti-inflammatory ဒြပ်ပေါင်းသုံးစွဲဖို့လည်းဖြစ်နိုင်သည်။
အားနည်း opioids ၏စစ်မှန်တဲ့ထိရောက်မှု၏ဖြစ်ရပ်အတွက်မေ့ဆေး၏ဒုတိယအဆင့်တွင်အသုံးပြုသော:
ခွဲစိတ်ကုသပြီးနောက်အသုံးပြုမှုအတွက်အပြင်းထန်ဆုံး analgesic တက်ဘလက်
ခွဲစိတ်ကုသပြီးနောက်နာကျင်မှုကယ်ဆယ်ရေး, အဓိကအားဖြင့် Non-တီးရွိုက် Anti-inflammatory မူးယစ်ဆေးဝါးများ, ဥပမာ, Ketanova, Ibuprofen, Nimesulide အားဖြင့်အထဲကယူသွားတတ်၏။ ပြဿနာများရှိပါတယ်လျှင်ခဲ, အားနည်း opioids သာ (3 ရက်အထိ) အချိန်ဟာအလွန်တိုတောင်းသောကာလအတွက်သို့မဟုတ်တစ်ခုတည်း, သတ်မှတ်ထားသောနိုင်ပါသည်။
Paint အဆိပ်သင့် - လက္ခဏာများ
အဆိုပါအန္တရာယ် microadenoma pituitary?
Imodium - analogue
နာတာရှည်ပင်ပန်းနွမ်းနယ် Syndrome - လက္ခဏာများ
Urinalysis - ယူရန်နှင့်ရလဒ် decipher ဖို့ဘယ်လို?
ဦးထုပ် - Fall 2014
Cosmetology အတွက် Darsonval
မိမိတို့လက်နှင့်အတူ plasterboard ၏တစ်ဦးကနှစ်ခု-Level မျက်နှာကျက်
ထောပတ်မုန့်နှင့်အတူ pancake ကိတ်မုန့် - တစ်ခုလုံးကိုမိသားစုအတှကျရိုးရှင်းပြီးအရသာချက်ပြုတ်နည်းများဆုံးသောခဲဖွယ်စားဖွယ်!
တက်ဘလက်အတွက် LTE ကိုကဘာလဲ?
Daniel Craig - လိင်တူချစ်သူ?
မိမိတို့လက်နှင့်အတူ mastic နှင့်အတူကိတ်မုန့်
Kim Kardashian ကီလိုဂရမ်အရှုံးဝတ်လစ်စလစ်ဓာတ်ပုံကျင်းပ